Maxaa Sababay Qiime Korodhka Shidaalka Somailand | Baligubadlemedia.com
Maxaa Sababay Qiime Korodhka Shidaalka Somailand
𝗠𝗮𝘅𝗮𝗮 𝗾𝗮𝗮𝗹𝗶𝘆𝗲𝗲𝘆𝗮𝘆 𝗦𝗵𝗶𝗶𝗱𝗮𝗮𝗹𝗸𝗮?
Shidaalkii ilaahada kor buu u sii socdaa, Xalayna markale ayuu kordhay, Dhagihii Xukuumaduna wey xidhan yihiin, oo waxaad moodaa in aanay u soo jeedin waxan socda in ay wax ka qabato. Si ay ka tahayba. Naafatadii waxa ay hadda maraysaa litirkii 0.95$ ama 7700shiling. Sababta shiidaal qaaliguna waa :
1- Shirkada la yidhaa Trafigura, oo shiidaalka ay iibiisaa yahay mid Standar ah dunida ugu qaalisan waxaana isticmaala dalalka shiidaalkooda la kabo ama shiidaalka la soo baxa. Haddaba inagu taasi ma qaadi karno waana sababta koowaad ee shiidaal qaaliga.
2- Waa shirkad labaad ee la yidhaa Nubia Petroleum, taasi oo ah shirkada iibka shiidaalka u qaabilsan Trafigura.
3- Lacagta ay wax ku iibiyaan Nubia iyo Trafigura, waxa ay rabaan in lagu shubo Bangiyada Dubaay, shirkadaha iyo kaalmaha shiidaalka iibsada ee wadaniga ahina ma wada awoodaan in ay lacagta ugu shubaan dubay. Si kale haddii aan u dhigo lacag kaasha haddii aad u gayso waxba kaama iibinayaan taasina waa caqab.
4- Dhamaan shirkadihii waxa qasab looga dhigay in ay keenaan nooca shiidaalka ee Sulphurtiisu tahay= 500Ppm halkii laga keeni jiray nooca ay Sulphurtiisu tahay=5000pmm. Si aad u fahamto qodobkani waa mid caqabad ku ah dhamaan shirkadaheena oo ay adag tahay in ay soo helaan nooca 500Ppm Sulphur.
“The environmentally friendly choice is therefore to use diesel containing 50 parts or particles per million (ppm) – i.e. 0,005% sulphur – instead of diesel containing 500 ppm or 0,05% sulphur”.
5- Halkii foosto waxa cashuur iyo kharash soo raaca lacag dhan inta u dhaxaysa $16.216 ilaa /15.216.
6- Haamihii Dawlada 50% in u dhiganta waxa la siiyay Trafigura, 50%ka soo hadhayna waxa la wada siiyay 12 Shirkadood oo waddani ah shiidaalkana keena taasina waxa ay sababtay in la waayo Haamo shiidaal lagu shubo. Shiidaalka buuxa Haamuhuna waa kaa qaaliga ah ee Trafigura.
7- Trafigura ka hor halkii Foosto waxa ay ku iman jirtay $80 imikana $130 meelahaasi.
8- Haamaha Dahabshiil gaarka u lee yahay oo iyaguna keenay kiro saa’id ah oo laga qaado cidii wax ku shubanaysa. Wixii aan ahayn shiidaalkiisa ay Hass ku shuraakada yihiin.
9- Shirkadihii Waddaniga ahaa ee kale oo aan haysan Haamo shiidaal oo ay wax ku shubtaan.
Markii aan u kuur galay sababta shiidaalku ku qaaliyoobay waxa iisoo baxay 9kan qodob oo dhamaantood ah mid ku yimid arin maamul waliba aan xidhiidh la lahayn shiidaalka dunida ka qaaliyoobay, dhamaantoodna waa mid dawladu wax ka qaban karto haddii ay diyaar u tahay.
𝗫𝗮𝗹𝗸𝘂 𝘄𝗮𝗮 𝗺𝗮𝘅𝗮𝘆?
Xalku waxa weeyi wax aad u fudud si loo helo shiidaal Jaban, waana sidan:
1- Gabi ahaanba in Trafigura meesha laga saaro. Haddii aan laga saarina ha la tartamee la joojiyo shuuruuda ah 500Ppm Sulphur.
2- In la jabiyo lacagta Cashuurta iyo adeega shiidaalka ee ku dhaw $16, hadii aan la kabayn.
3- In dhamaan Haamaha kaydka shiidaalka dawladu la wareegto, oo loo sinaado ama sida Dahabshiil oo kale shirkadaha kalena loo ogolaado in ay dhistaan Haamo u gaara .
sadexdaasi qodob ayaa ah xalka Mushkilada shiidaalka ee hadda taagan.
Waxa qoray Nuuradiin Diini